Ungasarudza sei compost Turner muchina?
Panguva yekuitwa kwe yekutengesa organic fetiraiza kugadzirwa, pane michina yakakosha inoita chinhanho chakakosha mune yekushambadzira yemanyowa yekuvirisa - compost Turner muchina, taizounza ruzivo rwekutanga nezve compost Turner, kusanganisira mashandiro ayo, mhando uye nzira yekusarudza yakakodzera.
Basa re compost Turner
Kompositi Turner yave musimboti wemidziyo yemushambadziro weaerobic mukukosha kwemhedzisiro yakakosha pane manyowa nekuvirisa.
♦ Kusanganisa basa mukutapisa kwezvinhu zvakasvibirira: mukugadzira manyowa, zvinodikanwa kuwedzera chimwe chinhu chidiki kuitira kugadzirisa carbon nitrogen ratio, pH kukosha uye zvemvura zvemukati zvigadzirwa. Huru mbishi zvigadzirwa uye zvidiki zvigadzirwa zvinoiswa pamwechete zvinoenderana nechimwe chikamu zvinogona kusanganiswa zvakaenzana nehunyanzvi kompositi Turner yekunatsiridza kutsamwa.
Just Chinja tembiricha yezvinhu zvakasvibirira mirwi: panguva yekushanda, kompositi Turner inogona kugadzira mbishi zvinhu zvakanyatso bata uye kusanganisa nemhepo, izvo zvinogona kugadzirisa kupisa kwemirwi zviri nyore. Mhepo inobatsira maaerobic microorganisms kuburitsa kuvirisa kupisa nekushinga, murwi tembiricha ichikwira. Zvichakadaro, kana tutu tembiricha yakakwira, kutendeuka mirwi kunogona kuunza kuwanikwa kwemhepo nyowani, iyo inogona kudzikisira tembiricha. Uye zvakasiyana siyana zvinobatsira zvidiki zvinokura uye zvinoberekana mune inoenderana tembiricha renji
♦ Kuvandudza kukwana kwemidziyo yezvinhu: composting system inogona zvakare kupwanya tsvimbo uye kubvarura mbishi kuita mashoma mashoma, zvichiita kuti mirwi ishore, yakatambanuka uye ine porosity yakakodzera, iyo yanga iri tsika yakakosha yekuyera mashandiro emakomputa Turner.
♦ Kugadzirisa hunyoro hwezvinhu zvisina mbichana mirwi: Iyo yemukati yezvinhu mbishi zvekuvirisa inofanira kudzorwa mukati me55%. Mukuvirisa, iyo biochemical reaction ichagadzira nyowani nyowani, uye kudyiwa kwehutachiona kuzvinhu zvakasvibirira kunoita kuti hunyoro hurasike mutakuri uye husununguke kunze. Naizvozvo, pamwe nekudzikiswa panguva inoenderana kwehunyoro mune yekuvirisa maitiro, mukuwedzera kune evaporation inoumbwa nekupisa conduction, kutendeuka kweasina kuchena murwi necompost Turner muchina ichagadzira zvakare kusungirwa kwemhepo kwemvura.
♦ Kuziva chakakosha chinodikanwa chekugadzira manyowa: semuenzaniso, manyowa anotendeuka aigona kuziva zvinodiwa kupwanya mbishi zvinhu uye kuramba akatendeuka.
Mushonga we composting unoita kuti kuvirisa kuve nyore, ipfupi miitiro uye inowana inotarisirwa kuvirisa mhedzisiro. Aya anotevera akati wandei akajairwa macompost Turner michina.
Types we compost Turner
Chain ndiro Compost Turner
Iyi nhevedzano yemupfudze Turner yakanyatsogadzirwa-cheni, iyo cheni ichishandisa mhando yepamusoro uye yakasimba zvikamu. Hydraulic system inoshandiswa kusimudza uye kudzikisa, uye kudzika kwekudzoka kunogona kusvika 1.8-3 metres. Material kutwasuka vachisimudza kukwirira anogona kusvika 2 metres. It
unogona kuita basa rekushandura nekukurumidza, zvinobudirira uye nekuwedzera zvinoshandiswa. Iine hunhu hwediki dhizaini, mashandiro mashandiro uye kuchengetedza nzvimbo yebasa, uyu muchina we composting unogona kushandiswa zvirinani muminda dzakasiyana siyana dzakasiyana mbishi, senge mupfudze wezvipfuyo, sludge yekumba, tsvina yezvokudya, zvekurima organic marara zvichingodaro.
Groove Rudzi Kompost Turner
Inotora keteni dhiraivhu uye kutenderera rutsigiro hwendefa dhizaini nediki kutendeuka kuramba, kuchengetedza simba uye yakakodzera yakadzika groove composting mashandiro. Kunze kwezvo, ine kupwanya kugona uye murwi wezvinhu une maitiro akanaka ekuzadza okisijeni. Yayo yakatwasuka uye yakatwasuka kufamba inogona kuona iko kutendeuka kushanda pane chero chinzvimbo mune iyo groove, inochinjika. Asi zvakare ine muganho wekuti inongogona chete kushanda nekuvirisa tangi, saka kusarudza iyi imwechete inoda kuvaka inowirirana yekuvirisa tangi.
Crawler mhando Kompost Turner
Izvi chinokambaira mhando manyowa anotendeuka yakagadzirirwa michina ye Window composting uye Fermentation tekinoroji kuburitsa organic fetiraiza. Iyo haisi chete inokodzera nzvimbo yekunze yakavhurika, asiwo yemusangano uye greenhouse. Iyo ine simba inochinjika, yakachengeteka uye yakavimbika mashandiro, uye iri nyore kugadzirisa. Zvinoenderana neshoko reeerobic Fermentation, muchina uyu unopa nzvimbo yakakwana kuti zymogeneous bacteria itore basa rayo.
Vhiri vhiri Compost Turner
Wheel Type Composting Turner Machine ndeyokugadzira composting uye yekuvirisa michina ine hurefu hwakareba uye hudzamu hwemombe yezvipfuyo, sludge nemarara, kusefa madhaka, yakaderera slag keke uye huswa hwehuchi muzvigayo zveshuga, uye zvakare inoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa uye kupera mvura mu organic fetiraiza zvirimwa, remubatanidzwa fetiraiza zvirimwa, mafekitori emarara uye emarara, mapurazi egadheni uye zvirimwa zvebismuth.
Matipi ekusarudza compost Turner
Kunyangwe iwe uchingopinda mumusika, kana uine ruzivo ne composting, mibvunzo inogara ichisimuka kuti ndeupi rudzi rwe compost Turner ingangonyatso kukodzera zvaunoda uye wepazasi mutsetse. Sarudzo dzinogona kudzikira zvakanyanya mushure mekufunga zvinhu, mamiriro uye zvinangwa zvebasa rekugadzira manyowa.
Paunenge uchitenga, ita shuwa kuti chishandiso chakachengeteka uye chakavimbika.
Kubuda kweimwe kompositi kutendeuka kunoenderana nekumhanya kwayo kwekufamba uye saizi yewindow yainogona kubata.
● Sarudza macomposter Turner zvinoenderana nemurwi wezvinhu uye kutendeuka. Makina makuru uye akasimba anowanzove nemitero yakakura nekuti anogadzira hombe mbishi yezvinhu.
● Tarisa zvakare nzvimbo inoda yeiyo compost Turner machine. Iyo inokambaira mhando kompositi inotendeuka inoda nzvimbo yepasi peaisle uye mamwe mamodheru.
● Mari uye bhajeti, hongu, zvinokanganisawo sarudzo yemidziyo yekuisa manyowa. Muchina une hukuru hukuru uye kugona unenge uine mitengo yakakwira, saka sarudza yakakodzera.
Muchidimbu, panguva dzese, unogona kupindura paUS.